Dagaal Cusub oo la Saadaalinayo in uu Dhex Maro Eritrea iyo Ethiopia – Rasaasa News
May 18, 2011 ayaa si sahal ah ku jiidhi doona ciidamada Eritrea, Ciidamada Ethiopia oo ka mid ah ciidamada Afrika ugu tirada iyo awooda badan, Dagaal Cusub oo la Saadaalinayo in uu Dhex Maro Eritrea iyo Ethiopia, dagaalkuna ma noqon doono kii sanadkii 1988.
Waxaa la saadaalinayaa dagaal cusub oo ku dhex mari doono labada dal ee Eritrea iyo Ethiopia magaalada dekada ah ee Casab, sidaasina waxaa qoray wargayska Indian Ocean.
Waxaa baryihii ugu dambeyay soo badanayey hanjabaadyo ka imanayey dawlada Ethiopia oo ku saabsan in ay talaabo ka qaadi doonto xukuumada Eritrea oo noqotay xukuumad fadqalale u jirta.
Dawlada Ethiopia waxay midaysay oo ay isu keentay mucaaradka Eritrea ee ku nool dalka Ethiopia, kuwaas oo diyaar u ah in ay ridaan xukuumada Isayaas Af-warqo.
Af-warqo, oo isagu baryahan dambe u muuqda nin aad u itaal daran oo ay caafimaad daro badani ka muuqato, ayaan wax jawaab ah ka bixin mudo dheer hanjabaada Ethiopia.
Hanjabaada badalkeeda waxaa uu jeclaystay in uu dhiniciisa ka abaabulo mucaaradka Ethiopia ee dalkiisa jooga, wayse adagtahay xiligan in uu dumo mucaarad niyad haya oo Ethiopia la dagaalama.
Hadaba, waxay u egg tahay in hanjabaadii Ethiopia ay dhab noqonayso. Wargaysku wuxuu qoray in tuulada Mille oo ku taal bariga Ethiopia, una dhaxaysa xadka Eritrea iyo Jabuuti, ay isku uruursanayaan maleeshiyaad Eritrean ah oo wata baabuur milatari.
Maleeshiyaadku gulufkooda weerar ee ugu horeeya, waxaa lagu wadaa magaalada dekada ah ee Casab, iyaga oo gacan ka helaya Ethiopia iyo Jabuuti.
Wararku waxay sheegayaan in Maleeshiyaadka Eritreanka ah ay ku adag tahay in kaligood ay ka adkaadaan ciidamada Eritrea.
Sidaas daraadeed waxaa la saadaalinayaa in gulufka dagaalka ay gali doonaan ciidamada Ethiopia, oo fasax ka haysta London iyo Washington.
Ciidamada Ethiopia oo ka mid ah ciidamada Afrika ugu tirada iyo awooda badan, ayaa si sahal ah ku jiidhi doona ciidamada Eritrea, dagaalkuna ma noqon doono kii sanadkii 1988.
Hadaba, su,aasha la isweydiinta leh ayaa ah ciidamada Ethiopia, galitaanka ka dib ma ka bixidoonaan dalka Eritrea, arintaas waxay ku xidhnaan doontaa London iyo Washington.
Dalalka reer galbeedku horay bay u muujiyeen kalgacal la,aan xukuumad kasta oo ka dhalata dalka Eritrea, in ayna wanaag ka shaqayn doonin, waxayna yidhaahdeen “xornimadii Eritrea waxay ahayd in laga fiirsado.”
Safiirka ururka midowga Afrika, Eritrea u fadhiya Addis Ababa, Girma Asmeromat, oo ku hadlaya magaca xukuumada, ayaa ka codsaday shirkii 275, ee ururka midowga Afrika April 26, in ay Ethiopia xurmayso go,aankii sharciga ahaa ee caalamka, ee ku saabsanaan calaamadinta xadka u dhaxeeya Eritrea iyo Ethiopia.
Waxaa uu yidhi “waa in shuruud la,aan ay Ethiopia ciidamadeeda ugala baxdaa dalka Eritrea.” Inaga oo tixraacayna hadalkiisii, waxaa uu cuskaday Heshiiskii lagu gaadhay Aljeris qodobkiisa 4aad, jumlada 15aad iyo qodobka 5aad, jumladiisa 7aad.
“Ethiopia waa in sida uu yahay ay u fulisaa go,aankii Guddigii xadka Eritrea iyo Ethiopia, loo qabtay sanadkii 2002, oo soo saaray 2007, go,aan ah in dib loo calaamadiyo xadka labada dal,” ayuu yidhi safiirku.
Cabshada Girma, waxaa uu u ekaa war la qabo xiiso ma leh, oo cidina kama hadlin. Waayo xukuumadiisa ayay Afriki nacday, aduunka go,aan buu ka gaadhay.